Distros: Kely, maivana, tsotra ary tanjona tokana sa ny mifamadika amin'izany? | Avy amin'ny Linux
Distros: Kely, maivana, tsotra ary tanjona tokana sa ny mifamadika amin'izany?
Ao amin'ny tontolon'ny linux matetika dia misy adihevitra mahasalama maro momba ny fomba fijery samihafa, toy ny hoe, Iza no tsara indrindra Tontolo iainana Desktop (DE), ny tsara indrindra Window Manager (WM), ny tsara indrindra Startup Manager (DM), ny karazana na kinova tsara indrindra an'ny Kernel, ary mazava ho azy, tsy mety tsy ho hita izy io, ny tsara indrindra GNU / Linux Distro, ankoatry ny maro hafa?
Mazava ho azy fa tsy hahazo a valiny azo antoka na manerantany, farafaharatsiny mba iray valiny marimaritra iraisana, satria azo antoka fa ny vondrona mpampiasa tsirairay dia afaka mahatsapa tena mahazo aina sy afa-po amin'ny endrika maso, mahomby ary mamokatra, miaraka amin'ny ankafiziny sy ankafiziny DE, WM, DM, Kernel na Distro GNU / Linux. Ka amin'ity lahatsoratra ity dia hizahantsika kely io teboka io, fa amin'ny Distros.
Programme rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Distros GNU / Linux an'ny taona 2020
Resabe hafa, izay matetika mitranga matetika ao amin'ny tontolon'ny linux Izy ireo dia mety: Iza amin'ireo rindranasa inona no tsara indrindra? Indrindra ny Automation ofisialy, mpizaha Internet na lalao. Raha mahaliana anao koa ireo lohahevitra ireo matetika, dia manasa anao izahay hamaky aorian'ny famaranana ity famoahana ity, ity manaraka ity Lahatsoratra mifandraika:
Safidy maimaim-poana sy maimaim-poana ho an'ny Office MS ho an'ny 2020
1 GNU / Distros Linux
1.1 Ahoana ny ankamaroan'ny olona toy ny GNU / Linux Distros?
1.2 Ahoana raha misy GNU / Linux Distros vitsivitsy?
GNU / Distros Linux
Ahoana ny ankamaroan'ny olona toy ny GNU / Linux Distros?
Nandritra ny 10 taona mahery nampiasako GNU / Linux, ary tsy hoe amin'ny fomba ahoana fotsiny mpampiasa mahazatra (automatisation birao) fa toy ny mpampiasa mandroso (teknika) Azoko lazaina, fa ny ankamaroan'ny Mpampiasa Linux izay tamin'ny herin'izy ireo manokana dia nanapa-kevitra ny hampiasa GNU / Linux mazàna dia manana nitombo fahalalana ankapobeny solosaina, ireo izay amin'ny alàlan'ny toe-javatra "X na Y", dia tafiditra amin'ny toe-javatra mampiasa GNU / Linux.
Noho izany dia nino izy fa ny ankamaroan'ny Mpampiasa Linux mifanaraka amin'ny maodelim-barotra amin'izao fotoana izao saika ny rehetra GNU / Distros Linux, izany hoe, Distribution atolotra amin'ny alàlan'ny ISOs kely, eo anelanelan'ny 1 sy 2 GB, ho an'ny fampidinana haingana sy fampiasana amin'ny kapila USB kely. Fitsinjarana tsotra, minimalista ary tokana, izany hoe, miaraka amina fanjifana mahazatra mahazatra sy ireo rindranasan'ny mpampiasa faran'izay tsotra izay azon'ny olon-tsotra ampiasaina amin'ny solosaina, na ho an'ny trano, na an-tsekoly na ho an'ny birao.
Io, mba hanolorana azy ireo, manararaotra izay azony natao ben'ny tanàna fahalalana informatika, tena tsara Fototry ny rafitra miasa hamolavola ny tsiro sy ny filanao.
Na izany aza, misy ihany koa ny soa GNU / Linux Distros manokana Amin'ny sehatry ny haitao sasany dia manolotra mpampiasa manokana bebe kokoa izy ireo, efa vonona, amin'ny zavatra rehetra mahaliana azy ireo, izany hoe, Distros novainaina:
Ireo mpitia hackers na matihanina,
Tia lalao na matihanina,
Fihetseham-po amin'ny fiainana manokana sy ny cyber
Mpamorona atiny multimedia
SysAdmin na DevOps matihanina,
Mpiasa na mpankafy ny fitrandrahana nomerika na fikarohana ara-tsiansa.
Ireo rehetra ireo, amin'ny ankapobeny na dia manam-pahaizana manokana aza dia mirona hatrany Fitsinjarana kely, tsotra ary minimalista.
Ahoana raha misy GNU / Linux Distros vitsivitsy?
Aiza ireo mpampiasa solosaina izay voafetra ny fahalalan'ny solosaina amin'ny fampiasana rindranasa rehetra, ary tsy mahalala na te-hametraka rindranasa avy amin'ny sehatra samihafa, ary / na ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra (internet) dia tsy misy na voafetra be na lafo be?
Izay misy ny GNU / Linux Distros ho an'ireo izay te hampiasa GNU / Linux Distro tsy maivana fotsiny, fa matanjaka, tsy minimalist fa tsara tarehy, tsy misy tanjona fa multurpose, ary mazava ho azy fa tsy kely ny habeny fa lehibe, izay manolotra hanana be, tsy misy na kely na amin'ny Internet?
Izany no izy GNU / Distros Linux misy ho an'ireo mpampiasa solosaina izay maniry ny zava-drehetra vonona, izany hoe, rehefa apetraka dia tsy afaka mamantatra sy mampiasa fampiasa sy fitaovana faran'izay betsaka (mpanonta, multifunctional, wifi, bluetooth, na hafa) amin'ny solosain'izy ireo fotsiny izy ireo.
Amin'ireo mpampiasa ireo dia misy maro ary matetika izy ireo no mampiasa Windows, indrindra Varavarankely vaky, feno fangatahana tompony, mihidy sy mihidy vaky, ilaina na tsia, azo antoka na tsia, ilaina na tsia, fa amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa no mampifamatotra azy ireo amin'izany, manakana azy ireo tsy handeha any amin'ny Tontolo Linux. Matetika azo atao izany rehetra izany satria, a Windows solosainaAzonao atao ny mametraka haingana sy manamboatra izany rehetra izany fa tsy mila Internet, na mampiasa Windows izay efa manana rindranasa am-polony na an-jatony tafiditra ao anaty DVD na mihoatra.
Azo antoka, GNU / Distros Linux como el Debian sy Ubuntu, manolora DVD azo sintonina feno fonosana vonona hapetraka, handamina ary hanatsara raha toa ka tsy manana Internet ianao na manana fetra voafetra na lafo, ary ny hafa toa Mint, Deepin, Elementary ary Zorin Manolotra rindrambaiko faran'izay tsara sy isan-karazany izy ireo miaraka amina interface tsara sy mora ampiasaina ho an'ny maro.
Ary ny hafa tahaka OS tsy misy farany manolotra ISO lehibe kokoa sy feno kokoa feno fampiharana vonona hametraka sy hampiasa tsipika tsy andalana izy ireo. Raha, MX Linux manolotra tena tsara Distro Live izay mamela anao hizaha toetra ny zavatra rehetra atolotra alohan'ny hametrahana.
Fa, manokana toy ny fandinihana ity lahatsoratra ity, noforonina fa fotoana izao ho politikan'ny mpamolavola ny Renim-pianakaviana distrika na derivatives, manambatra ireo tombontsoa rehetra miparitaka any amin'ireo Distros marobe, ary manome an'io mombamomba ny mpampiasa manokana io, ho solon'ny ISOs nentin-drazana efa misy (tanjona kely, maivana, tsotra ary tokana) ny manaraka:
"Live ISO hatramin'ny 4 GB izay azo zahana mivantana, ary rehefa apetraka dia efa omenao ny mpampiasa ny fanangonana matanjaka ny fampiharana multipurpose tsara indrindra sy ny mpamily sy ny tranomboky ankapobeny indrindra, ho an'ny karazana fitaovana anatiny sy ivelany.".
Izany rehetra izany, ny tsara indrindra tafiditra ao a fanjifana loharanon-karena mety, izay mampihena ny filàna mametraka, manamboatra ary manatsara, ny fampiharana sy ny masontsivana, amin'ny mpampiasa sy teknisianina GNU / Linux tsy manana traikefa, ary amin'izany dia mampihena ny mety hitranga mandritra ny fotoana fohy ny valiny ovay matetika ny Distros na miverena amin'ny Windows.
Amin'ny ahy, mampiasa aho MX Linux, satria, tsy mamela ahy fotsiny andramo ary ampiasao ny zava-drehetra "miaina" Saingy aorian'ny fametrahana, fikirakirana, namboarina ary namboarina dia afaka mamorona a ISO Live napetraka araka ny tsiriko sy ny filako, mamaha marina ny olan'ny filana amin'ny Internet miverina manana ny zava-drehetra araka ny iriko sy ny olan'ny tsy maintsy mampiasa vola ora maharitra amin'ny fametrahana, fametrahana ary fanamboarana isaky ny mila manomboka indray aho.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Distros GNU/Linux» ary izy, manao ahoana izy ireo ary inona no safidy hafa tokony hatolony?; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Distros: Kely, maivana, tsotra ary tanjona tokana sa ny mifamadika amin'izany?
Michael dia hoy izy:
Tsara ny lahatsoratra iray izay ahafantarana ireo fitaovana entin'ny MX Linux sy ny fomba fampiasana azy ireo ary ny isos dia feno kokoa miaraka amina fitaovana iray manontolo ao anaty iray mitambatra ka maro ny olona mampiasa Linux
Valiny tamin'i Michael
Miarahaba anao, Michael. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia manome anao ny fampahalalana ilaina momba ny MX Linux sy ny fomba fanaovana ISO anao manokana miaraka aminy: https://blog.desdelinux.net/mx-snapshot-como-crear-respin-personal-instalable-mxlinux/
A47 dia hoy izy:
Inona no tsy mety amin'ny fisian'ny olona Windows hahafantatra GNU / Linux?
Tokony ho fantatrao fa ny GNU / Linux ho an'ny birao dia nandroso hatrany; mahatratra ny haavon'ny Ease toy ny Windows.
Na dia tsara aza izy ireo te hahafantatra GNU / Linux miaraka amin'ny distro izay saika nanompo ny zavatra rehetra.
Avy eo raha mila distros d̶e̶ ̶p̶r̶o̶f̶e̶s̶i̶o̶n̶a̶l̶e̶s̶ izay mila fahalalana bebe kokoa sy terminal madio izy ireo, dia izy ireo no hisafidy izany.
Tsy misy olona mbola tsy nampiasa CMD na Terminal te-hampiasa distro-n'ny baiko madio raha tsy misy interface interface.
Tokony ho hitanao ny lafiny tsara amin'ny GNU / Linux raha ampitahaina amin'ny Windows: azonao atao ny manova ny zava-drehetra araka izay itiavanao azy.
Valiny amin'ny A47
Miarahaba anao, A47. Misaotra tamin'ny hevitrao. Ary eny, izany no hevitra, mangataha Distros Linux mahery vaika matanjaka kokoa izay azo ampiasaina mivantana amin'ny fitiliana, ary rehefa apetraka dia manome amboaran-tsivana maro karazana fampiharana, mieritreritra ny mpampiasa vao avy vaovao sy tsy manana traikefa. / Linux, Fa iza no te-hanandrana zavatra betsaka, ary saika ny zava-drehetra dia miasa noho ny fanohanan'ny tranomboky sy ny mpamily miasa.
Google dia notoriana noho ny fanangonana mangingina angona avy amin'ireo mpampiasa Android
Clonezilla Live 2.7.0 tonga miaraka amin'i Kernel 5.9.1, fanavaozana fonosana ary maro hafa